I-Wholesale i-King kunye ne-Queen Couple T-shirt yoMvelisi kunye noMthengisi | Into
Uninzi lwexesha, ubudlelwane bethu budinga ukwaziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukubiza iqabane lakho ngamagama ahlukeneyo anomdla kunye nezihloko yenye yeendlela ezilungileyo zokubonisa kunye nokuxabisa uthando lwakho.
Akukho gama okanye isihloko esinokuthandeka kwaye sigqibelele njengo `` Kumkani '' kunye no `` Ndlovukazi ''. Ezi zihloko zinentsingiselo ekhethekileyo kunye nazo; la magama aya kwenza iqabane lakho liziva likhethekileyo ebomini bakho.
'' UnguKumkanikazi wam '' isivakalisi esilula esingenakuthelekiswa nanto kweli gama.
Ukupeyinta la magama, akukho nelaphu liya kulunga njengeeT-Shirts ezitshatayo. Ezi zinxibo zinje ngeT-shirts, iiHoodies, iiSweatshirts zingenziwa ngokommiselo wawo nawuphi na umsitho. I-T-shirt enesihloko esithi uKumkani noKumkanikazi iya kuba sesona sipho sithandekayo nesingalibalekiyo kwiqabane lakho.
Apha kwikhathalogu yethu, sinemveliso ebangela umdla nenomdla, okt, Iikipa zikaKumkani noKumkanikazi. Ezi T-shirts azikwenzi nje ukuba ube nesitayile kodwa zikwanika nembonakalo entsha negqibeleleyo.
Ukuba udiniwe zii-T-shirt ezilula kwaye ufuna ukubhiyozela uthando lwakho, ezi zikipa zezakho. Unokucinga ngokuthenga ezi zikipa zikaKumkani noKumkanikazi kwiingcebiso zethu.
Kwipakethi enye yeT-shirts, uya kufumana iiT-shirts ezimbini.
Inxalenye enye iya kuba yeyoKumkanikazi, enye ibe yekaKumkani.
Uya kufumana isaphulelo se-14% kwipakethi enye.
Imijikelo engqukuva kunye nesiqingatha semikhono iya kukwenza ube nesitayile kwaye ukhululeke.
Iikipa zenzelwe ukukwenza uzive kwaye ujongeke njengoKumkani noKumkanikazi.
Isikipa esinye siya kuba nesihloko esithi King nesithsaba kuso.
Esinye isikipa siya kuba seKumkanikazi nesithsaba kuyo.
Egqithileyo I-T-shirt yomtshato kaHubby Wifey
Okulandelayo: Mnu Nksz Couple Sweatshirt
Isikipa sikaKumkani noKumkanikazi
I-King kunye ne-Queen Couple T-shirt Unisex
I-T-shirt kaKumkani kunye neKumkanikazi yokuHamba ngeKumkanikazi
I-T-Shirt yesiKhosi kunye neKumkanikazi yesiqhelo
I-T-shirt kaKumkani noKumkanikazi ehlekisayo
I-T-shirt ka-King kunye ne-Queen Honeymoon
UKumkani kunye noKumkanikazi abatshatileyo i-T-shirt
I-T-shirt kaKumkani kunye neKumkanikazi ehambelana nesibini
I-T-shirt kaKumkani noKumkanikazi yoSuku lwe-Valentines